कोरोनाको माहामारीः चीनबाट हामीले के सिक्ने ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कोरोना भाइरसबाट विश्व नै त्राहिमाम् बन्दै गईरहेको बेला यस भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको चीनको वुहान पहिले जस्तै नियमित अवस्थामा फर्किएको छ । विश्वका एक सय ९८ देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएको छ । चीनबाट शुरु भएको यो भाइरसले अहिले युरोपलाई केन्द्र बनाएको छ । चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको कोभिडले अहिलेसम्म संसारभर ४२ हजार बढीको ज्यान लिईसकेको छ । चीनमा ३ हजार ३ सय १२ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमित ८१ हजार ५ सय ५४ जनामध्ये निको भएका ७६ हजार २ सय ३८ छन् । पछिल्लो पाँच दिनमा वुहानमा कोरोना संक्रमित नयाँ विरामी शून्य देखिएका छन ।
युरोपको कला र संस्कृतिको अग्रणी इटाली सबैभन्दा बढि प्रभावित बनेको छ । विश्वको स्वास्थ्य संगठनको र्याङकिङ अनुसार विश्वकै दोस्रो राम्रो स्वास्थ्य सेवा रहेको इटाली यसको नियन्त्रण गर्न पुर्ण रुपमा असफल भइसकेको छ । त्यस्तै हालत स्पेन र जर्मनीको पनि छ । संसारको महाशक्ती राष्ट्र अमेरिकालाई कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको छ । यसले विश्वको शक्ती सन्तुलन नै परिवर्तन हुन् सक्ने अवस्था सिर्जना आँकलन गरिदैछ ।
जति बेला चीनको वुहान पुर्ण रुपमा लकडाउनमा थियो, त्यतिबेला युरोप र अमेरिका खिसिटिउरी गर्दै थिए । चीनले लकडाउन गरेर मानवअधिकार हनन् गरको भन्दै वक्तव्यबाजी गर्न समेत पछि परेनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदा अमेरिकाले वेवास्ता गर्यो । युरोपले पनि नसुने झैँ गर्यो । आज चीन कोरोना नियन्त्रणको खुशियाली मनाउँदैछ भने युरोप र अमेरिका हायलकायलको अवस्थामा छन् । कोरोना नियन्त्रणमा चीनले अपनाएको मोडल नै प्रभावकारी बन्ने निश्चित प्राय छ ।
चीनले कस्तो तरिका र उपायले कोरोनामाथि विजय हात पा‍र्यो ? यतिबेला सबैको ध्यान यसमै केन्द्रित भएको छ । कोरोनाको पहिलो संक्रमण देखिएको हुवेई चीनको प्रमुख मध्यको एक औद्योगिक प्रान्त हो । हुवेईको प्रान्तीय राजधानी वुहानलाई विश्वकै फ्याक्ट्री पनि भनिन्छ । एक करोड बिस लाख मानिसको बसोवास रहेको वुहानमा २०१९ डिसेम्बर अन्तमा नयाँ भाइरस देखियो । भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि ३१ डिसेम्बरमा चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई निमोनियाजस्तै नयाँ बिरामीको संख्या बढेको जानकारी गरायो । त्यसपछि विश्वकै ध्यान चीनमा फैलिएको नयाँ भाइरसमा केन्द्रित भयो । वुहानमा दैनिक हजारौँको संख्यामा नयाँ मान्छेमा भाइरसको संक्रमण देखिन थाल्यो ।
पहिलोपटक ‘सी फुड मार्केट’ मा यो भाइरस देखिएको थियो । जनावरबाट भाइरस फैलिएको आशंकामा चीनले ‘सी फुड मार्केट’ १ जनवरीमा बन्द गर्यो । तैपनि भाइरस संक्रमितको संख्या कम भएन । नयाँ वर्षको रमझममा रमाइरहेको चीनले सुरुवातमा मान्छेबाट मान्छेमा कोरोनाको संक्रमण फैलिन्छ भन्ने कुरा पत्तै पाएन । भाइरसका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएका कारण चीनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । तर, ९ जनवरीमा संक्रमणका कारण एकजनाको मृत्यु भएपछि चीन थोरै गम्भीर देखियो । भाइरस जाँच गर्ने किट तयार गर्दा गर्दै जनवरी दोस्रो साता शुरु भइसकेको थियो । जनवरी तेस्रो सातासम्म पुग्दा वुहानमा कोरोना संक्रमणका कारण मृतकको संख्या बढिसकेको थियो ।
चीनले २३ जनवरीमा वुहान सहर लकडाउन ग‍र्यो । सार्वजनिक सवारीसाधन, रेल, विमान सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगायो । वुहान सहरबाट बाहिर जान र सहर भित्रिन प्रतिबन्ध लगायो । संसारभरका मानवअधिकारवादीले चिनियाँ कदमको आलोचना गरे । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने लकडाउन गर्ने चिनियाँ निर्णयकै कारण वुहानबाहिर भाइरसको संक्रमण रोकिएको तथ्य प्रस्तुत गर्यो। एक महिना लामो लक डाउनपछि वुहान सहरको जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेको छ । २७ मार्चसम्म चीनमा नयाँ संक्रमितको संख्या ४६ मात्र छ ।
राष्ट्रपति सी जिङपिङले १० मार्चमा चिनियाँ शहर वुहान भ्रमण गरे । १९ मार्चमा चीनले वुहान सहरमा एउटा पनि नयाँ संक्रमित नभेटिएको बतायो । ३ हजार ३ सय १२ (यो सामग्री तयार पार्दासम्म) जनाको मृत्युपछि चीनले कोरोनामाथि विजय हासिल गरेको घोषणा गरिसकेको छ । चीनले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्रीसहितको टोली अहिले कोरोनाको उच्च संक्रमण देखिएको देश इटालीमा पठाएको छ । जसको अर्थ हो– चीनले कोरोना नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
८१ हजार ५ सय भन्दा बढी मान्छे संक्रमित भइरहँदा चीनमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव पनि महसुस भयो । डाक्टरको पनि अभाव हुन थाल्यो । यो अभाव पूर्ति गर्न चीनले आफ्ना अन्य प्रान्तबाट वुहानमा डाक्टर पठाउन शुरु ग‍र्यो । कोरोनाको इपिसेन्टर वुहानमा चीनका विभिन्न प्रान्तबाट ४० हजारभन्दा बढी डाक्टर र नर्स आए ।
विभिन्न कम्पनीले भिडभाडमा मास्क नलगाएको मानिस पहिचान गर्ने प्रविधि पनि विकास गरे । मास्क नलगाई हिँड्नेलाई समातेर मास्क लगाउन भनियो । लक डाउन गरिएको वुहानमा मात्र होइन, कोरोना संक्रमण देखिएका अन्य सहरमा बसोवास गर्ने मान्छेलाई एउटा ‘क्यू आर’ कोड दिइयो । ‘क्यू आर’ कोडमा मान्छेको यात्रा विवरण, रोगजस्ता कुरा समावेश गरियो । अर्थात् मान्छेमाथि अत्यधिक निगरानी राखियो ।
एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्वास्थ्य सामग्री ओसार–पसार गर्न कुरियर सर्भिसले निःशुल्क सेवा दिए । अन्य बिरामी भएकालाई तीन महिनाको औषधि घरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलायो । देशभर अस्पतालको सञ्जाल बनाएर निःशुल्क कोरोना जाँचको व्यवस्था गरियो । वुहान सहरका प्रत्येक गल्लीमा कोरोना जाँच गर्ने क्याम्प स्थापना गरियो । कोरोना संक्रमित सबैको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्‍यो । कोरोना संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका सबैको खोजी गरियो । संक्रमित व्यक्ति गएको सबै स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरियो ।
यति मात्र होइन, लकडाउन सहरभित्रका हरेक मान्छेको सूची तयार गरियो । ती मान्छेहरू कहिले कहाँ गए ? को–कोसँग भेटे भन्ने तथ्यांक निकालियो । र, त्यसैका आधारमा जाँच गरियो । देशभरका सडकमा थर्मल क्यामेरा जडान गरियो जहाँ कुनै पनि व्यक्तिको तापक्रम ३७.२ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी देखिनेबित्तिकै क्वारेन्टाइनमा राखियो ।
जसका आधारमा डाक्टरलाई संक्रमण पहिचान गर्न र क्वारेन्टाइनमा पठाउन सहज भयो । क्वारेन्टाइनमा राख्न १६ वटा मात्र अस्थायी अस्पताल निर्माण गरियो । सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक समाचार सम्प्रेषणमा जोड दिइयो । चिनियाँ सञ्चारमाध्यम मात्र होइन, चीनबाहिर रहेका कूटनीतिज्ञ पनि सकारात्मक समाचार फैलाउन लागिपरे ।
वुहानबाहिर संक्रमण फैलिन नदिन चीनले कडा नियम लागू गर्यो । १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने प्रावधान कडाइसाथ लागू गरियो । हुवेई प्रान्तमा यात्रा गरेका वा त्यहाँका मान्छेसँग सम्पर्क भएका मान्छेले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भयो । आफ्नो सहर छाडेर बाहिर गएका नागरिकले पनि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भयो । देशभित्र वा देशबाहिरबाट यात्रा गरेर आएका वा यात्रा गरेकाहरूसँग सम्पर्कमा आएकाले पनि १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भयो । छिमेकमा कोही संक्रमित छ भने क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने भयो । ३७.३ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम देखिएमा पनि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम चीनले कडाइसाथ लागू गर्यो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ, ‘संकटको समयमा चीनले द्रुत गतिमा आफ्नो कार्य देखाएर विश्वलाई चकित पारेको हो । ढिला नगर्नुहोस् । यो चीनबाट सिकिएको उदाहरण हो । कुनै पनि हालतमा ढिला नगरौँ । छिटो गरेर मात्र पुग्दैन, सुपरफास्ट तरिकाले काम गर्नुपर्छ ।’ क्वारेन्टाइनको यो कडा नियमका कारण हुवेई प्रान्तको वुहान सहरभन्दा बाहिर कोरोना संक्रमण धेरै फैलिएन । यसबाहेक चीनले आफ्ना ठूला सहरमा हरेक तीन सय मिटरको फरकमा तापक्रम नाप्ने व्यवस्था मिलायो । यसले कोरोना संक्रमणको शंका लाग्नासाथ जाँच गर्न सजिलो बनायो ।
यदि चीनले एक करोड १० लाखभन्दा बढीको बसोवास भएकोवुहान लक डाउन नगरेको भए ? वा चीनलेवुहान लक डाउन गर्ने निर्णय लिन एक दिन मात्र पनि ढिला गरेको भए ? अवस्था भयावह हुने निश्चित थियो । लक डाउन र मान्छेबीचको दूरी बढाउने काम नै कोरोना नियन्त्रणमा चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार साबित भयो । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ– “मान्छेबीच दूरी बढाउनु नै कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने एक मात्र उपाय हो । शंका लागेका हरेक मान्छेको जाँच निःशुल्क गर्नुहोस् (अमेरिकामा कोरोना नेगेटिभ भेटिएमा शुल्क लिने गरिएको छ) मान्छेबीच दूरी बढाउनुको विकल्प छैन ।”
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार चीनले संक्रमण फैलिन नदिन प्राचीन तरिका अपनायो । अर्थात् मान्छे–मान्छेबीचको सम्पर्क टुटायो । जसका कारण कोरोना भाइरस फैलिन पाएन । चीनले वुहान सहर मात्र होइन, हुवेई प्रान्तका साना–ठूला गरी १५ वटा सहर पनि लकडाउन गर्यो । आवत–जावतमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । तर, प्रतिबन्ध लगाएर, लक डाउन गरेर मात्र भाइरसमाथि चीनले विजय हासिल गरेको भने होइन । भाइरससँगको लडाइँ चीनको राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्यो । संक्रमणको इपिसेन्टर मानिएको वुहानमा देशभरबाट स्वास्थ्यकर्मी ल्याइयो । देशभरको स्वास्थ्य सेवा वुहानमा केन्द्रित गर्यो । र, चीनको आधुनिक इतिहासमा पहिलोपल्ट सैनिक स्वास्थ्यकर्मीलाई नागरिकको उपचारमा खटाइयो ।
यति प्रयासले मात्र भाइरसमाथि विजय पाउन सम्भव थिएन । बढिरहेका संक्रमितलाई राख्न वुहानका अस्पताल अपर्याप्त भइसकेका थिए । त्यसैले चीनले आफ्नो अद्भूत निर्माण क्षमताको प्रयोग गरेर एक हजार शैयाको एउटा र १६ सय शैयाको अर्को एउटा अस्पताल निर्माण गर्यो । विद्यालय, होटेल र रंगशालालाई क्वारेन्टाइनमा परिणत गर्यो । चीन सरकारको यी कामले संक्रमित व्यक्तिलाई सहज भयो । संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि सजिलो भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना संक्रमणका लक्षणबारे चीनले भाइरसको तुलनामा निकै छिटो जानकारी फैलायो । यसले मान्छेलाई सचेत बनाउन मद्दत ग‍र्यो । शंका लागेका व्यक्तिलाई जाँच गराउन पनि सहज बनायो । लक डाउन गरिएको वुहानका घरमा रहेका अन्य बिरामीलाई औषधि, अत्यावश्यक वस्तु र खाद्यान्न घर–घरमा पु‍र्याउने व्यवस्था मिलायो ।
कोरोना भाइरस कुनै देश वा भूगोल विशेषको लागि मात्र नभएर समग्र विश्व र मानव जातिकै लागि चुनौति हो । योे भाइरस अमेरिका, चीन र युरोपका लागि सैन्य युद्ध भन्दा बढी खतरनाक युद्ध हो भने नेपाल जस्ता साना अल्प विकसित राष्ट्रका लागि जीवन मरणको सवाल हो । यसले सारा विश्वको अर्थतन्त्र र व्यापापरिक अवस्थालाई समेत खल्बल्याएको छ । ५ जनामा मात्र कोरोनाको संक्रमण देखिदा नेपाल जस्तो सिंगो देश ठप्प अवस्थामा पुगेको छ । यसप्रति अझै समयमै सरोकारवाला जीम्ममेवार बन्न नसके यसबाट निस्कने परिणाम झनै भयावह बन्ने निश्चित छ ।